Betty Univerty | Esi Elee Bingo
(Nigeria - Igbo)
Esi Elee Bingo
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta otú e si egwu online bingo , mgbe ahụ ị bịa ebe kwesịrị ekwesị. Nke a bụ ihe nduzi zuru oke maka egwuregwuplay na-ekpuchi ihe ọ bụla ị chọrọ ịma - site na akụkọ ihe mere eme nke egwuregwu n'ịntanetị na-akpali akpali n'oge a.
Ịtọ mmasị gị
Enwere ike imezi ihe ndi egwu egwu site na iji ọrụ onwe gi na otutu ebe bingo. Ha nwere ike ịgbanwe ọtụtụ atụmatụ nke akaụntụ ha maka mkpa nke onwe ha. Nke a nwere ike ịgụnye ego ha nwere ike ịkwụnye, iji nyere aka na itinye aka na mmefu ego, yana:
Nne na nna njikwa
Paswọdu na nchebe akaụntụ
Ịhọrọ ihe aha
Ndị na-egwu egwu ekwesịghị iji ezigbo aha ha mgbe ịgba chaa chaa na ịntanetị. Ha nwere ike ịhọrọ aha na-atọ ọchị ma ọ bụ aha aha nke ga-egosipụta ihe niile. Paswọdu na nchedo akaụntụ Kuki kaadị bụ otu n'ime mkpebi ndị kachasị mkpa mgbe ị na-egwu bingo n'ịntanetị. Ndị egwu chọrọ ikpebi:
Auto dab - njirimara nke na-akpachapụ anya na bọtịnụ mgbe a dọtara ha.
Ịzụta ego - na-azụta akpa kaadị maka ọkacha mmasị ma ọ bụ setịpụ egwuregwu dị ka mmasị.
Nnukwu zụrụ - zụta tiketi maka egwuregwu ndị na-abịanụ ndị egwuregwu enweghị ike ịzụta online na oge ndị dị mkpa
Ị na-agagharị na saịtị
Ozugbo ndị otu egwuregwu debanyere aka ma mee ka nkwụnye ego mbụ , ọ bụ ezi echiche ịmara onwe ha na ebe nrụọrụ weebụ. Ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla dị iche iche, ọ pụkwara iwepụ obere oge ka ị wee hụ ebe ihe niile dị. Ọtụtụ saịtị ga - egosiputa na taabụ nke ga - akpọrọ gị gaa ebe dị iche iche - dịka egwuregwu, promotions , akaụntụ gị, mobile nhọrọ na ihe ndị ọzọ
Dịka bingo bụ egwuregwu na-agụnye ọtụtụ egwuregwu, egwuregwu ga-amalite dịka usoro ihe edoziri. Otú ọ dị, ihe saịtị ndị a ma ama nwere egwuregwu ugboro ugboro na-amalite nkeji ole na ole, ya mere ndị egwuregwu agaghị echere ogologo oge. Banye na a ga-enwe egwuregwu malite n'oge ọ bụla, ụbọchị 24 n'ụbọchị, ụbọchị 365 kwa afọ.
Dị ka ụlọ ezumezu bingo n'ezie, saịtị bingo n'ịntanetị nwere oghere ebe ndị egwuregwu nwere ike ịchọpụta ihe dị mkpa banyere iwu, egwuregwu, ụlọ akụ na ụma. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a ga-abụ ma ụlọ obibi. Pịa taabụ na ọ na-ebute ihe nchọgharị n'ime oghere. Ịkwụsị ego na-adịkarị mfe ma doo anya nke ọma na ọtụtụ saịtị, mgbe mgbe na 'ụlọ akụ' ma ọ bụ onye na-azụ ego.
Ebe ebe ọ bụla egwuregwu bingo (90 bọl, 75 bọl, etc.) na-ewere ebe a na-akpọ ụlọ bingo. Mgbe egwuregwu na-ahọrọ egwuregwu wee pịa tab, ha abanye n'ime ụlọ ahụ. O kwesiri ikwesie ike igwughari n'ime ulo nke obula, nke obula choro nke oma. Bọọ Bingo Ichekọ kaadị bụ otu n'ime mkpebi ndị kachasị mkpa mgbe ị na-egwu bingo n'ịntanetị. Ndị na-egwu egwu kwesịrị ikpebi:
Kaadị ole ka igwu egwu na egwuregwu ọ bụla
Ole ọnụ ọgụgụ ha na-agbasa na kaadị (karịsịa mgbe ị na-akpọ ọtụtụ kaadị)
Ndi na - akparita uka - Nkata egwuregwu
Bingo bụ egwuregwu mmadụ, yana dị ka mmeri, akụkụ nke ọchị na-akparịta ụka na egwuregwu ndị ọzọ. Egwuregwu dị iche iche na-enwe mkparịta ụka n'ime ụlọ ebe egwuregwu nwere ike ịmepụta usoro ma nwee nnọọ nkata izugbe. A na-ahazi nkata niile iji hụ na ihe niile dị n'elu osisi. Ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị nwere ike ime ka ndị egwuregwu ghara ịnweta, n'ihi ya, ọ na-abụkarị enyi. Egwuregwu egwu na-eme ka ndị ọrụ egwu nweta ego ndị ọzọ dị mkpa site na itinye aka na ịbụ enyi.
Iwu Bingo Basic
Iwu ndị bụ isi nke online bingo na-egosi n'ụzọ doro anya. Ndị na-egwu egwu na-ahọrọ egwuregwu ha chọrọ igwu ma nye ha kaadị mejupụtara kwekọrọ. Ndị a na-ewere ụdị grid, na ọtụtụ ọnụọgụgụ nke akararịrị akara na ahịrị. Mgbe egwuregwu ịntanetị malitere, onye na-akpọ - nke bụ usoro ntanetị nke na-ahọrọghị - na-amalite ịbịpụta nọmba. Ndị na-egwu egwu ga-agbaso ọsọ ọsọ, na-edebanye nọmba na kaadị ha, dịka na mgbe akpọrọ ha. N'aka nke ọzọ, ha nwere ike iji njikwa auto auto iji hụ na ha anaghị ahapụ oku. Dabere na egwuregwu zuru ezu ị na-egwu, wepụ akara, akara ọtụtụ ma ọ bụ nọmba gị niile - mara na egwuregwu dị ka ụlọ zuru ezu - ma ị merie ihe nrite. Egwuregwu bụ 'nke mbụ gara aga n'usoro usoro', yabụ mgbe onye ọkpụkpọ na-enweta ụlọ zuru ezu, egwuregwu ahụ gafere.
Dịka e kwuru n'elu, enwere egwuregwu dị oke egwu, onye nke ọ bụla nwere iwu dịtụ iche dịka dabere na kaadị kaadị maka akara.
Jackpots bụ onyinye nrite maka onye mmeri nke egwuregwu ọ bụla, ma ọ bụ ọtụtụ egwuregwu. E nwere ụdị dị iche iche:
Jackpots guzobere - E nyere ha onyinye n'egwuregwu ọ bụla n'agbanyeghị ugboro ole ha meriri
Ọganihu Jackpots na-aga n'ihu- Gwagharịa oge ọ bụla a naghị ekwu ụgwọ a. Ka ndị mmadụ na-egwuri egwu, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu. Ozugbo a meriri ya.
Ụmụaka Jackpots -Ebe onye ọ bụla na-egwu egwu n'oge ọganihu na-aga n'ihu na-enweta òkè.
Gụkwuo banyere jackpots na-aga n'ihu
Egwuregwu dị iche iche
Ọ bụ ezie na usoro ịntanetị nke bingo na-anọgide na otu oge ahụ, e nwere egwuregwu dị iche iche nke nwere ọdịiche dị aghụghọ na iwu. Ọ dị mkpa ka ndị egwuregwu nwee ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ụdị egwuregwu dịgasị iche iche, ma ghọta ụkpụrụ nke egwuregwu ọ bụla ebe ha na-egwu egwu.
Ụdị egwuregwu ndị bụ isi bụ:
90 bọlbụ bingo
75 bọtịnụ bingo
80 bọlbụ bingo
30 bọlbụ bingo
Egwuregwu ndị a na-emekarị na mba ụfọdụ mana ha abanyela n'ịntanetị. Ọtụtụ ụdị online bingo na-agba gburugburu otu n'ime usoro ndị dị n'elu. Ọtụtụ egwuregwu sitere na omenala 90, 75 na 80 bọl, 30 bọmbụ bụ mgbakwunye ọhụrụ. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-ezo aka ọnụ ọgụgụ nke oghere na okporo na achọtara na kaadị bingo na-eji. Egwuregwu egwuregwu dị mma Na egwuregwu egwuregwu bọl, e nwere ụdị bingo n'ịntanetị nke na-agbaso gburugburu usoro. Ndị a na-ekwe ka ndị egwuregwu merie site na ịmepụta akara ugbo na kaadị ha na-aga na ala, n'aka ekpe na aka nri, ma ọ bụ ọbụna diagonally. Egwuregwu egwuregwu Egwuregwu ndị a na-achọ ka ndị egwuregwu mepụta otu ụdị na kaadị ha iji merie. A mara ọkwa ndị a tupu usoro egwuregwu amalite ma e nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche na-egwu egwu, gụnyere triangles, crosses, squares na ndị ọzọ.Egwuregwu ihe egwuregwu Dị ka usoro abụọ ahụ dị elu, akwụkwọ ozi ederede chọrọ ka ndị egwuregwu jiri akara nke mkpụrụ akwụkwọ dee akara ngosi.
A choro ka ndi oru egwu mejue kaadị ha nile, nke bu ihe mere ha ji mara dika coveralls. Ha na-ewe oge iji wuchaa ma ndị egwuregwu nwere ike itinye aka na ya. Ọ bụ egwuregwu na-agba agba egwuregwu bingo.
90 bingo bb
90 bingo bb bu bingo omenala na UK na Europe. Ndị na-egwu egwu na United States na Canada nwere ike ịmatakwu egwuregwu 75 nke egwuregwu ahụ ma ndị egwuregwu ekwesịghị ichegbubiga onwe ha ókè dịka iwu ahụ dị ma ọ bụ karịa.
Etu egwu bingo 90
Ndị na-egwu egwu na-azụta kaadị, na bọọlụ ndị generator (RNG) na-abaghị uru na-emepụta n'ime usoro ịgba chaa chaa n'ịntanetị.
90 bingo di iche iche mara nke oma site na otutu ihe, gunyere:
Kaadị ahụ nwere mpaghara atọ dị larịị na ogidi itoolu
Kaadị ọ bụla nwere nọmba iri na ise, ise na akara ọ bụla
Kọlụlụ otu nwere nọmba otu na itoolu
Kọlụm abụọ nwere nọmba iri site na iri na itoolu, ya mere na ruo 90
Akụkụ atọ na egwuregwu ahụ
A na-egwu egwuregwu ahụ n'akụkụ atọ.
Nke mbụ, ndị egwuregwu na-aga maka eriri, na-achọ ịbụ ndị mbụ iji mezue akara dị na kaadị ha.
Mgbe ahụ, ndị egwuregwu na-aga maka ahịrị abụọ, na-achọ iji mezuo usoro abụọ. Ọ dịghị mkpa ma ọhụụ abụọ ejirila, ọ bụrụhaala na ha nọ na kaadị ahụ.
N'ikpeazụ, ndị egwuregwu na-achọ imezu ụlọ zuru ezu, ebe ha na-edepụta nọmba niile dị na kaadị.
75 bingo bingo bụ ụdị a na-egwuri egwu na United States na Canada. Ndị na-egwu egwuregwu na UK na Europe nwere ike ịmara nke ọma 90 ụdị bọlbụ dị iche iche ma iwu dị nnọọ ka ya mere ndị egwuregwu ga-enwe ike igwu egwuregwu abụọ ahụ n'ụzọ dị mfe. N'ihi mgbasa nke online bingo, a na-akpọkwa ya na Europe na UK. Esi egwu 75 bingo
Ndị na-egwu egwu na-azụta kaadị ndị nwere akara nọmba amaala. Egwuregwu ahụ amalite na ọnụọgụgụ site na onye na-akpọ weebụ. Ndị na-egwu egwu ga-ehichapụ akara ọ bụla a na-akpọ nọmba na-egosi na kaadị ha.
75 bingo bhipo na-ama oke site na otutu ihe, gunyere:
Kaadị nwere akara ise dị larịị na ogidi ise
Kọlụlụ ọ bụla na-eduga site na okwu edemede BINGO
Kọlụm mbụ, B, nwere ike ịnwe nọmba otu site na 15
'M' ga - enwe iri na isii ruo 30, ya na
Oghere dị n'etiti kaadị bụ n'efu ma ọ nweghị nọmba na ya
Three parts to the game
Ebumnuche nke egwuregwu ahụ bụ iji mezuo usoro ụfọdụ, na ụzọ atọ dị mkpa iji merie. Ndị na-egwu egwu ga-enweta ma:
Ntọala, akara diagonal ma ọ bụ akara ntanetị
Ụkpụrụ a kapịrị ọnụ
Ndị na-egwu egwu ga - enweta ihe nrite, ma egwuregwu ahụ ga - aga n'ihu ruo mgbe mmadụ ga - enweta ụlọ zuru ezu site na ịchecha nọmba niile.
Ụdị bingo na-ejikarị egwu 75 egwu egwuregwu. Ndị na-egwu egwu na-achọ ịmepụta otu ụkpụrụ dị iche iche site na ọnụ ọgụgụ ndị e depụtara na mmalite nke egwuregwu ahụ. E nwere usoro dịgasị iche iche nke a pụrụ ịkpọ, na akwụkwọ ozi, crosses na okirikiri niile o kwere mee.
Ngwakwunye na-agbakwunye na bingo canon, 80 bingo na-ahụkarị dịka onye na-enwe obi ụtọ n'agbata 75 na 90 bọlbụ bingo - na nke ahụ dị nkenke karịa egwuregwu nke 90 bọl ma ọ bụ ihe karịrị 75 bọl. Ụkpụrụ ndị ahụ yiri nnọọ ụdị bingo ndị ọzọ, ya mere egwuregwu ga-adị mfe nghọta ma kpọọ, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dịtụbeghị mgbe ha na-egwu egwuregwu ahụ.
Esi egwu bingo 80
80 bingo bingo dị iche site na iche iche site na ndị na-esonụ:
Kaadị nwere ihe anọ dị larịị na ogidi anọ
Koodu nke ọ bụla ga-abụ agba dị iche
Egwuregwu ahụ na-egwuri egwu dị ka 75 bọtịnụ na ndị egwu na-atụgharị akara ngosi ndị a kapịrị ọnụ
Usoro ihe kachasị na-agụnye akụkụ anọ ọ bụla, ụdị X ma ọ bụ square squares
Enwere otutu ụzọ iji merie bingo 80.
Ndị na-egwu egwu nwere ike imeri site na ịpị aka na ntanetị, vetikal na diagonal lines
Ndị na-egwu egwu nwekwara ike imeri site na-eme usoro, dịka 75 bọl. A na-ekwu usoro ihe mmeri tupu egwuregwu amalite
N'ihe yiri ya na 75 bọl, 80 bingo bọta adịghị achọta na saịtị bingo mana ọtụtụ na ndị ọzọ na-enye ya dịka nhọrọ dị ka mmụba ya na-abawanye.
Atụmatụ dị elu
Bingo bụ egwuregwu nke ọdịda na ohere. Ndị na-egwu egwu amaghị mgbe ọnụ ọgụgụ ha ga-abịa ma merie nnukwu, nke bụ akụkụ nile nke ntụrụndụ. Otú ọ dị, dị ka ọ bụla egwuregwu nke ihe gbasara nke puru omume, e nwere ụfọdụ usoro na ụzọ ndị nwere ike melite ọkpụkpọ egwu nke na-emeri.
Zụrụ Egwuregwu na Big Jackpots
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịntanetị n'oge nnukwu egwuregwu jackpot , ndị egwuregwu nwere ike ịkwadebe kaadị egwuregwu maka oge ndokwa na ụbọchị ma ọ bụ izu. A na-enwetakarị kaadịadị maka nnukwu egwuregwu egwuregwu jackpot nke ndị egwuregwu na-achọghị uche, na mgbe ụfọdụ, nkwalite maka ndị a dị n'Ịntanet.
Mgbe ụfọdụ, kaadị ebu ibu na-ejedebe, ma ọ bụrụ na ha na-aga ire ahịa n'ọdịnihu, ha nwere ike ere, n'ihi ya, a na-adụ ndị egwuregwu ka ha zụọ ihe ngwa ngwa.
O nwere ike ịbụ egwuregwu nke ohere ma ọ ga-ekwe omume ịgbakọ nkwụsị nke mmeri na egwuregwu ọ bụla. N'adịghị ka ịgba chaa chaa, ọ ghaghị ịbụ onye na-eto eto na bingo, ya mere, ndị egwuregwu kwesịrị ịkekọrịta ọnụ ọgụgụ nke kaadị ha na-ejide ọnụ ọgụgụ zuru ezu na egwuregwu ahụ.
Ọ bụrụ na ọkpụkpọ nwere kalịnda 3 ma enwee 100 ngwugwu, egwu nke mmeri bụ pasent 3. Otu usoro a na-emetụta na egwuregwu niile. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịhọrọ igwu egwu naanị egwuregwu ka ha wee nwee ohere inweta mmeri.
Ụfọdụ egwuregwu na-ahọrọ naanị ịnwale na egwu maka nnukwu jackpots. Site na kaadị ebubo na nnukwu ego, egwuregwu nwere ike inwe nsogbu karịa naanị ego buru ibu.
Ndị ọzọ na-eme egwuregwu na-agbalị ịnweta akara ndị ka nta, na-enweta ọtụtụ mmeri na n'ụzọ dị otú a. Eke ọ bụla nwere uru nke ya na ihe ndọghachi azụ ya.
5 Atụmatụ Ikpeazụ
Eleghi anya ihe kacha mkpa ndi mmadu kwesiri icheta bu itinye ego na itinye aka na ya. Ọ bụghị naanị na usoro iwu a bụ otu n'ime atụmatụ bingo dị mma kama ọ na-enyekwara ndị egwuregwu aka n'ihe ize ndụ ihe ha nwere ike imeli.
Idebe ego a na-enye aka na-eme ka egwuregwu na-atọ ụtọ n'ịkụ egwu, n'ikpeazụ, nke ahụ bụ ihe dị.
O yiri ka ọ bụ ndụmọdụ doro anya ma ọ nwere ike ịbụ ihe niile na-esiri gị ike ịmalite ịkpọ egwu n'enweghị oge iji mata iwu. Egwuregwu ọ bụla na ụlọ ọrụ ga-enwe usoro iwu nke aka ha, n'ihe gbasara egwuregwu, cashiers, ego na ihe ndị ọzọ.
Ndị na-egwu egwu kwesịrị ịma iwu niile tupu ha etinye ọkwa ọ bụla. Ọzọkwa, ọ bụ akụkụ nile nke atụmatụ bingo zuru ezu.
Mara mgbe ị ga - ewepu
Dị ka e kwuru n'elu, online bingo kwesiri ịbụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ ga-ekwe omume ịbịaru egwuregwu ahụ ruo ogologo oge. Nke a bụ mgbe a na-eme mkpebi ọjọọ ma ndị ọrụ egwu nwere ike idafu ego.
A gwara ndị na-egwu egwu
Wepụ oge niile site na egwuregwu
Kọwaa uche ha na ọrụ ọzọ
Nyocha ma nyochaa usoro ha
Cheta na ị gaghị emefe
Ọ dị mkpa igwu egwu bingo n'ịntanetị na isi doro anya ma na-elekwasị anya.
Play na oge dị iche iche nke ụbọchị
Enwere oge ụfọdụ n'ụbọchị mgbe ọtụtụ ndị egwuregwu ga-adị n'ịntanetị. Oge na-arụ ọrụ ma ọ bụ mgbede ụtụtụ bụ oge na-arụsi ọrụ ike, ebe ndị mmadụ na-echegharị ma na-atụrụ ndụ. Oge ndị ọzọ na-arụ ọrụ gụnyere oge ehihie na ngwụsị izu. Mgbe egwuregwu ndị ọzọ na-aga n'ịntanetị, nsogbu nke mmeri na-arịgo elu. Ndị na-egwu egwu kwesịrị ịgbalị ịgbanarị egwuregwu ha, na-aga n'Ịntanet n'oge dị iche iche nke ụbọchị. O nwere ike ọ gaghị abụ otu oge nke ụbọchị na-enye ndị ọrụ egwu kachasị mma, ma mgbanwe na-enye ha ohere ịgbasa ohere ha.
Họrọ Jackpots buru ibu
Ịgba egwuregwu na nnukwu jackpots na-eme ka onye ọkpụkpọ nwee ohere nke na-emeri nnukwu. Nnukwu egwuregwu jackpot na ndị jackpots na-aga n'ihu na-ewu ewu, na ọtụtụ egwuregwu, ma na-enweta ezigbo onyinye. Nke a bụ ebe nnukwu ego meriri.
Mpị Bingo: Tippett na Granville
Bingo bingo nwere ike ịbụ egwuregwu nke ohere, mana dịka ọ nwere ike inwe, ịmara nkwupụta ahụ nwere ike inye aka mee ka nsogbu gị dịkwuo mma. E nwere echiche abụọ bingo dị mkpa ma dị ịrịba ama, J.E Granville, onye na-enyocha ego ụwa, na L.H.C Tippett.
Usoro nke Granville na-agba ndị egwuregwu ume ịhọrọ kaadị nke na-agbasa ma na-echekwa. Nke a pụtara:
Ntụle nke bọọlụ na-adịghị mma
Ntụle nke nnukwu na ala bọọlụ
Otu ọnụọgụgụ nọmba ahụ na-agwụ na 1,2,3,4 na na
Nke a bụ na na ihe egwuregwu nwere ike inwe ga-emesị bụrụ ọbụna nkesa nke ọnyà na ọbụna, nọmba dị elu na nke dị ala ma na-agwụ. Usoro nke Tippett dabeere gburugburu egwuregwu egwuregwu bọl. Ọ na-ekwu na ị ga-enwerịrị òkè nke ọnụọgụgụ nọmba gị gburugburu etiti, ịbụ 38 na egwuregwu a. Ka egwuregwu ahụ na-aga n'ihu, ka enwekwuo ohere ọnụọgụgụ ndị ahụ ga-adị nso na nke a. Usoro abụọ ahụ nwere ndị na-akwado ha, ma ọ pụtaghị na ha ga-enwe ọganihu 100%.
ikike nwebisiinka 1997 - 2017 Ụlọ ọrụ Gassava (Gibraltar) Limited, nke nwekọrọ aka 888 Holdings plc.
A na-emepụta ụlọ ọrụ Gassava (Gibraltar) Limited na Gibraltar, nke bụ akụkụ nke European Union.
A na - ede 8888 Holdings plc na Stock Exchange.